uhteik: Blog for All Seminar အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး
Blog for All Seminar အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး
ယနေ့ ၂၀၀၇ခုနှစ် သြဂုတ် ၃၁ရက် မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ရတနာပုံဆိုက်ဘာကော်ပိုရေးခန်းမအတွင်း Blog for All ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Seminar တစ်ရပ်ကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ မန္တလေးတိုင်းကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲနိုင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ ဘလော့ကာများ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ စာနယ်ဇင်းဆရာ၊ဆရာမများ စုစုပေါင်း ၄၀၀ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် မန္တလေးတိုင်းကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးညီညီလင်းက အမှာစကားပြောကြားသည်။ ထို့နောက် မန္တလေးတိုင်းကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌဦးရဲနိုင်က Live Blog အဖြစ် mdyblogshow.blogspot.com တွင် ပို့စ်တင်ပေးပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး Alpha Info-Tech Co.,Ltd. မှ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးရဲမြတ်သူက ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့် အမှာစကားပြောကြားသည်။ Service+ Co.,Ltd. မှ ဦးရဲထွန်းအောင်၏ အမှာစကားအား ကိုကျော်ကျော်ဝင်းမိုးက ဖတ်ကြားသည်။ ယင်းနောက် ဘလော့ကာ မရတနာချိုက ဘလော့အကြောင်း မိတ်ဆက်စကားပြောသည်။
ထို့နောက် ဘလော့ကာ ကိုဆန်းဦး၊ ကိုအောင်ချမ်းလင်း၊ ကိုဘဦးတို့က ဘလော့အကြောင်း အသီးသီးဟောပြောကြသည်။
ယင်းနောက် ဘလော့ကာများအား မဲနှိုက်ကာ မိတ်ဆက်ပေးကာ မေးခွန်လွှာအား အဖြေများပြန်လည်ရှင်းလင်းသည်။ ဆက်လက်ပြီး http://www.mysuboo.com/ အား မိတ်ဆက်သည်။
ထို့နောက် မေးခွန်လွှာ ဖြေဆိုမှုတွင် ရမှတ်အများဆုံးဖြေဆိုနိုင်သူများအား ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်များပေးအပ်သည်။
ဆက်လက်ပြီး ဘလော့ကာဦးထိပ်က ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားကာ အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားအား မန္တလေးတိုင်းကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၊ Alpha Info-Tech၊ Service+၊ http://www.mysuboo.com/ ၊ Future's Sky၊ Azure၊ ivilla၊ kkwinmoe၊ Compu-Care၊ mam၊ AIT၊ မဆွေ၊Heaven's Net၊ iWAY၊ Imagine၊ Nice၊ pantra၊ ဦးကျော်ဇင်(ဗီနိုင်း)၊ NTG၊ Lucky Birds၊ CEM၊ Active Media(CD)၊ ဦးဆန်းဦး-MCC၊ ဦးလှကောင်း၊ မချောအိမာန်၊ Nanologic တို့က ကူညီပံ့ပိုးပေးကာ မန္တလေးဘလော့ကာများက ဖြစ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
Posted by U Hteik အချိန် 6:16 PM
Blog Day (8)
ဘလော့မရေးတာကြာပါပြီ. . . ဘလော့ပြန်ပွင့်တာကို . . . ဂုဏ်ပြုလျက် . . ပြန်ရေးဖြစ်တဲ့နေ့ . . .၂၉-၈-၂၀၁၁
ဘလော့ဒေးအထိမ်းအမှတ် ဘလော့ကာများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ရှေဆက်လို့ ဘလော့ကာများ ချစ်ကြည်စွာ စည်းလုံးလျက်ရှိနေကြမည်။
2007 Blog DAY ကြိုဆိုပါ၏
Blog for All Seminar ဖိတ်ကြားခြင်း
Blog for All Seminar ကျင်းပမည်
မယ်ပြိုင်ပွဲဝင် ဘလော့ကာ . . . ဂုဏ်ယူလျက်ပါ
၂၀၀၇ခုနှစ် ရွှေမန်းမောင် - ရွှေမန်းမယ် ပြိုင်ပွဲ ကျင...
Blog Day အထိမ်းအမှတ်ပွဲ
ဘလော့ဒေးအတွက် ဘလော့ကာတွေ ဆုံရအောင်
တောင်ပြုန်း တောင်ပြုန်း ပွဲတော် တောင်ပြုန်း
တောင်ပြုန်းပွဲရဲ့ နတ်တို့ရဲ့ ညီလာခံသဘင်နေ့
ဘလော့ဒေးအထိမ်းအမှတ် CD ထဲမှာ ထည့်ရမည့် အကြောင်းအရာ...
blog day အတွက် ပြင်ဆင်ကြရအောင်
အိုးပုတ်ခိုးပွဲတော် သို့ အိုးပုတ်ပွဲတော်
ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံပညာနေ့ အထိမ်းအမှတ် မိတ်ဆုံ စားပွဲ
နံနက်ချိန်ခါ ကြည်နူးစရာ ဆွမ်းလောင်းရင်း ကုသိုလ်ယြူ...
မန္တလေးတောင် ၀န်းကျင်သို့ တစ်ခေါက်
ဓာတ်ဆီ ၊ ဒီဇယ် ဈေးတက်ပြီ
ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံပညာနေ့ (World Photography Day) သြဂုတ် ...
blog day အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား မန္တလေးမှာ ကျင်းပမည်
တောင်သမန် အကြောင်း ပါလာတယ်
သမီးလေး မအေးချမ်းငြိမ်း အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်
နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်တော့ . . .
စိုးရိမ်ရေအမှတ်အထက်မှာ ရှိနေဦးမယ့် ဧရာဝတီ
တောင်သမန်မှာ အပန်းဖြေ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လေ
ဧရာဝတီရေနဲ့ မန္တလေးသားတို့ အားပြိုင်ပွဲ
ဒေါ်လာ သိန်းဂဏန်း တန်ဖိုးရှိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို အလွတ်တန်း အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ အတွက် အလုပ်ရှာပေးသော ပြည်တွင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှ ရရှိ
ဒေါ်လာ သိန်းဂဏန်း တန်ဖိုးရှိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို အလွတ်တန်း အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ အတွက် အလုပ်ရှာပေးသော ပြည်တွင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှ ရရှိ ●...